China Yakagadziriswa Tsvuku Fiberi Reed Stick yeiyo Diffuser Mafuta Set fekitori nevatsigiri | Hoyer
Kuchengeta wega girazi bhodhoro
Bhodhoro remafuta emafuta
Cosmetic kirimu jar
Girazi remishonga bhodhoro
Inokosha Mafuta Bhodhoro
Girazi rewaini yewaini
Tsvuku Wine Bhodhoro
Munyu uye Pepper Bhodhoro
Girazi rechinwiwa bhodhoro
Yakasarudzika Matema Fibhi Reed Zvimiti zveDiffuser Mafuta Set
Reed diffuser tsotso inonyanya kuve ne rattan zvimiti uye fiti tsotso, yefaira zvimiti, unogona kusarudza chero chero ruvara rwaunoda, uye haruzombopera. Isu tinorongedza 120pcs sebhegi, iro rinogona kunyatso kukwana zvido zvako zvemba, unogona kuzvishandisa kuti udzore matanda mumba yekutandarira, hofisi, musika, imba yekugezera, yekugezesa mukamuri yekurara, chero kwaunoda.
Kukura: 3 * 250mm
imwe saizi iripo: sekuda kwako
Ruvara: chena, dema kana sekureva kwako
MOQ: 50,000pcs, hushoma huwandu hunogamuchirwawo kana isu tine stock
Kubatsira: tsvimbo yetsanga ine hutano hwakakwana hwekushandiswa kwemazuva ese iyo inogona kuburitsa kunhuhwirira kwemafuta zvishoma nezvishoma kuti mweya uenderere mberi kutsva. Chipo chakanakawo chipo chemazhinji mhemberero senge zuva rekuzvarwa, muchato, Kisimusi, Nyowani uye imba jotoinng.
Kukura: Kureba 25cm (8 inch), diam 3mm kana 5mm, kana chero yako yakagadzirirwa saizi.
Kushandisa: Ingoisa zvimiti zvakati wandei kana zvimiti zvetsiva mubhodhoro rekusanganisa, uye wozora imwe kunhuhwirira kana mafuta emafuta pamwe chete, zvimiti zvichatora mafuta zvishoma nezvishoma zvobva zvaunza kunhuhwirira kumhepo nenguva ichipfuura. Haisi iyo yekushongedza imwechete kumba, inogona zvakare kubatsira kudzinga ekunze kuravira uye kutsvaya kwemhepo mhando.
EXCellENT CUSTOMER BASA - Tichapa basa redu rakanakisa kune vatengi vedu, unogona kuwana 100% vimbiso kubva kukambani yedu. Kana iwe ukawana chero chisingakwanise kukugutsa, ndapota taura nesu uye isu tichaedza zvatinokwanisa kuti tigadzirise, kuti tigone kuita
Ruvara Ichena, dema kudhinda kana kurongedza ruvara zvakare inogamuchirika
MOQ 50pcs Huwandu hushoma hunogamuchirwawo kana tine stock
Post kugadzirisa Kupenda, decal, silika chidzitiro, kupuruzira pendi, chisando, goridhe kutsika, sirivha plating etc.Yakasarudzika Rodha, OEM dhiri inowanikwawo.
Package Carton, pallet kana seizvo zvaunoda
Sampula a. samples mu stock:QTY: 1-5pcsMutengo: zvakapihwa pachena
Nguva: mazuva 3-5
b. sampuli dzakagadziriswa:QTY: zvinoenderana nezvaunoda Mutengo: zvinoenderana nedhizaini yakagadzirwa uye chigadzirwa
Nguva: maererano neyakagadzirirwa dhizaini
Mutengo Iko mutengo unongori chako chirevo, chinogona kuchinjwa nehuwandu kana chairo chaunoda. Zvakare kana iwe uchida zvishandiso zvine chekuita nazvo bvunza isu, isu tichapa yedu yakanakira sevhisi.
Yepfuura: Inokwezva Sola Yakagadzirwa Neruoko Yakarukwa Yakaomeswa Mafuta Ekukora
Inotevera: Yakasarudzika Hwemhando yepamusoro Rattan Reed Diffuser Zvimiti
anonhuwirira diffuser bhodhoro
bhodhoro rekusvibisa nhema
isina tsanga tsanga emarara mabhodhoro
16oz 500ml Amber Girazi Boston Bhodhoro neNhema ...
Yakakwira Mhando 28/410 Plastiki Pombi yeLotion kana ...
Inokwezva Sola Ruva Yakagadzirwa Neruoko Rakaomeswa Ruva fo ...
3mm * 25cm Reed Stick yeiyo Diffuser Bhodhoro
Yakasarudzika Hwemhando yepamusoro Rattan Reed Diffuser St ...
28/410 Akakodzera Aluminium Cap yeGirazi Diffus ...
Kero:Chikamu 1106, Floor 11 (Xuzhou College Vadzidzi Venture Park), No.271, Qingnian Road, Yunlong District, Xuzhou
Runhare:+ 86- (0) 516-83669687